AKHRISO:- Wasiir ka tirsan Dowlada Soomaaliya oo is casilay – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeWararka SoomaaliaAKHRISO:- Wasiir ka tirsan Dowlada Soomaaliya oo is casilay
AKHRISO:- Wasiir ka tirsan Dowlada Soomaaliya oo is casilay
23/04/2018 Wararka Soomaalia 0
Hiiraan Xog, Apr 23, 2018:- C/casiis Xasan Maxamed Lafta Gareen Wasiiru dowlaha Wasaaradda Ganacsiga Xukuumadda Federalka Soomalaiya ayaa maanta ku dhawaaqay inuu iska casilay xilkaasi.
C/casiis Lafta Gareen oo maanta Warbaahinta kula hadlay Magaalada Muqdisho, ayaa sheegay inuu doortay iscasilaadaasi, kadib markii sida uu sheegay uu isku soo sharaxay xilka afhayeenka Baarlamaanka Soomaaliya.
Waxaa uu sheegay inuu yahay Musharax u taagan qabashada xilka Afhayeenka Baarlamaanka Soomaaliya, sidaasi awgeedna booska Wasiiru dowlaha uu isaga casilay.
Guddoomiyihii Golaha Shacabka Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa 9-kii bishan April iska casilay xilka Guddoonka, sida xeerka Baarlamaanka uu dhigayana ay waajib tahay in booskaas lagu buuxiyo mudo 15 maalmood ah.
Guddiga Qaban qaabada Doorashada Gudoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya ayaa horay u sheegay xubnaha Wasiirada ah ee isku sharaxaya xilka Afhayeenka Baarlamaanka Soomaaliya in laga doonaayo inay xilkaasi iska casilaan.
Shirka Wasiirada Arrimha Dibadda ee Urur goboleedka IGAD oo ka furmidoono magaalada Kampala
Taliyaha Ciidamada Xoga dalka Soomaaliya oo ka hadlay dagaalki ka dhacay Muqdisho